कोरोना आशंका : चौतर्फी आलोचनापछि बिरामी प्रदेश ५ को प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा भर्ना - MONGOL KHABAR
कोरोना आशंका : चौतर्फी आलोचनापछि बिरामी प्रदेश ५ को प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा भर्ना
नवलपरासी । चैत ७ शुक्रबार, चिकित्सकको चौतर्फी आलोचना बढेपछि कोरोना संक्रमित आशंकका गरिएका बिरामीलाई प्रदेश ५ को प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा भर्ना गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पतालले कोरोनाको आशंकामा भर्ना नगरेर अन्यन्त्र पठाएका पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका-१६ हकुईका ३५ वर्षीया एक युवकको प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आएपछि उनले परासीकै एक निजी अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । त्यसपछि पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल पुगेका उनलाई अस्पतालले प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाएको थियो । बुटवलले कोरोनाको आशंका भन्दै पुरानो मेडिकल कलेज चितवन पठाएको थियो । उक्त अस्पतालले समेत भर्ना नगरी बिरामीलाई काठमाडौं पठाइएको थियो ।
घर ल्याउने क्रममा बिरामीका आफन्तले पुनः पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीमा ल्याएका थिए । एम्बुलेन्समा ल्याएका बिरामीलाई चिकित्सकले छुन समेत मानेका थिएनन् । जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड छ । तर चिकित्सकले उपचारका क्रममा लगाउने पोशाक र अन्य सामाग्री नभएको र रोग सर्ने भन्दै बिरामीलाई नहेर्ने जनाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गौरब ढकालले बुटवल अस्पतालसँग समन्वय गरेका थिए ।
हाल उनलाई प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख गौरब ढकालले बताए । उनलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ । 'हिजो रातीदेखि बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको छ । आज बिहान थ्रोड स्वाबबाट नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न पठाइएको छ,' प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट खनाललाई उद्दृत गर्दै स्वास्थ्य प्रमुख ढकालले भने। उनको अवस्था सुधारोन्मुख हुँदै गएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले उक्त बिरामीका बारेमा ध्यानआकर्षण भएको बताए । 'आंशकामा अस्पतालमा आइसकेपछि बिरामीलाई भर्ना गरेर राख्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरिनु कमजोरी हो । यो हाम्रो लागि पाठ हो । अस्पताललाई गम्भीर भएर उपचारमा लाग्न भनेका छौं,' प्रेस सल्लाहकार केसीले भने।
बिरामीसँग चार दिनको अवधिमा उनकी श्रीमती, दुई वर्षे छोरी, बाबु र आमाले पालो दिँदै अस्पताल लैजाने काम गरेका थिए । बिरामीलाई अस्पताल लैजाने क्रममा दुईवटा एम्बुलेन्स प्रयोगमा आएका छन् । 'बिरामीलाई संक्रमण नदेखियोस् हामीले कामना गरेका छौं तर देखियो भने उनीसँग सम्पर्कमा आएकालाई कस्ले निगरानी गर्ने ?,' छिमेकी सुग्रिव बाँनियाले भने ।
पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीका कोरोना फोकल पर्सन डा. पवन अग्रहरीले प्रादेशिक अस्पतालले कोरोनाको लक्षण देखिएको रिपोर्ट दिएपछि जिल्ला अस्पतालमा नराखिएको बताए । आइसोलेसन वार्ड भएपनि उपचारमा प्रयोग हुने कुनै सामाग्री नभएकाले भर्ना गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । 'सरकारले आशंका गरिएका संक्रिमतको खोजतलास गर्नुको सट्टा सम्पर्कमा आएका बिरामीको पनि उपचार नगराई ठाउँ ठाउँमा पठाउँछ । यो कस्को कमजोरी हो,' डा. अग्रहरीले भने ।
पहिलो पटक प्रादेशिक अस्पताल पुगेका बिरामीलाई त्यहाँ नराखेर अन्यत्र पठाउनु नै अस्पतालको गम्भीर लापरबाही भएको उनले बताए।